Samsung's Unpacked chiitiko yakagadzirirwa kutanga kwaNyamavhuvhu, uye sewachiwachi, kwave kwakaburitswa spec dump yeiyo yakajairwa Galaxy Note 20, inotarisirwa kuvhurwa panguva yekuratidzwa WinFuture yakaburitsa iwo mafekitori. Saiti iyi zvakare achangobva kuburitswa specs kune yakakura, iri kuuya yeGlass Note 20 Ultra.
Iyo yakati Galaxy Cherechedzo 20 ichave ne6.7-inch, 1080p kuratidzwa ine 60Hz yekuvandudza mwero. Iyo Galaxy Note 20 Ultra, kune rumwe rutivi, inofungidzirwa kuva yakakura 6.9-inch 3200 x 1440 kuratidzwa kune kusvika ku120Hz kuzorodza mwero, seGlass S20. Iyo Cherechedzo 20 ine zvakare gorofa kuratidza, nepo iyo Ultra yakakomberedza mativi.
Kana ari macamera, mucherechedzo 20 une vatatu vekunzwa sensors, kusanganisira iyo 12-megapixel wide lens, 12-megapixel ultrawide lens, uye 64-megapixel portrait / telephoto lens. Ivo vanogona kutsigira 8K vhidhiyo kurekodha uye 30x Zoom. Asi Samsung inotarisirwa kupa mucherechedzo 20 Ultra kamera ine 108-megapixel ine 50x zoom kugona.
Chekupedzisira, WinFuture inofunga kuti Cherechedzo 20 inogona kunge iine yakajairwa S Pen, ichipa 26-millisecond response rate maringe ne9ms yeiyo Note 20 Ultra modhi, uye 4,300mAh bhatiri ine reverse isina waya kuchaja, 256GB yekuchengetedza (isina MicroSD), uye 8GB ye RAM. Inogona kunge iine processor imwechete seiyo Ultra.
Samsung Galaxy Note 9 zuva rekuburitsa, mutengo, nhau uye kubuda
Filed Under: famba Tagged With: Galaxy Note 20